“Manchester City waxay uqalmaan ku guuleysiga horyaalka” – Virgil van Dijk – Gool FM
“Manchester City waxay uqalmaan ku guuleysiga horyaalka” – Virgil van Dijk
(England) 13 Maajo 2019. Daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay kusoo laaban doono markale u dagaalamida horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aadan.
Liverpool ayaa ku guuldareysatay xili ciyaareedkan 2018-2019, inay ka qaado kooxda Manchester City koobka horyaalka Premier League, kaddib markii ay si xoogan ugu dagaalameen ilaa iyo wareega ugu danbeeyay, waxaana ugu dambeyntii ku guuleysatay Sky Blues.
Hadaba Virgil van Dijk ayaa ugu hambalyeeyay kooxda Manchester City inay ugu dambeyntii ku guuleysteen horyaalka Premier League, isagoo sheegay in tababaraha reer Spain ee Pep Guardiola uu shaqo fiican qabtay, islamarkaana uu u qalmo horyaalka.
“Hambalyo ayaan u dirayaa kooxda Manchester City, waxay uqalmaan ku guuleysiga horyaalka, waxay hubaal qabteen shaqo weyn, anagana sidoo kale”.
“Waxaan sameynay wax walba, inaad hesho 97 dhibcood, isla markaana aad soo bandhigto, qaab ciyaareed isku mid ah xili ciyaareedka oo dhan, waa arin lagu faani karo, runtii waan ku faanayaa kooxdaan”.
“Waan hubaa in Man United ay mar uun ku soo laaban doonto maalmihii Sir Alex Ferguson” - Sanchez
Alexis Sanchez oo raali-geliyey Taageerayaasha kooxda Manchester United